Bangladesa: Ny fahitan’ireo nody an-tanindrazana azy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jolay 2009 6:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, Español, বাংলা, English
Betsaka vondrona teratany niasa tany ivelany ary nody an-tanindrazana ao Bangladesh ka maro amin’izy ireny no miasa an-tsitrapo na mikarama amin’ireny fikambanana maro tsy miankina amin’ny fanjakana ireny. Tsy vitsy amin’izy ireny koa no mitoraka blaogy sy mizara ny zavatra niainany izay sady zava-marina loatra no voaporofo, fa tsy mba toy izay ambaran’ireo mpampahalala vaovao iraisam-pirenena momba an’i Bangladesh. Ireny fomba fijery ireny dia tena ilaina tokoa ho an’ireo tonga hitsidika an’i Bangladesh ary koa ho an’ireo Bangladeshis (ilazàna ny olona avy any Bangladesh). Anatin’ny hafatra voalohany amin’ity andiany ity dia asiako fanamarihana manokana ny amin’ireo teratany nody an-tanindrazana ka mitoraka blaogy, sy izay resaka ambaran’izy ireny
Nikkibomb ao amin’ny Amar Bangla Na dia nandeha tany amin’ny Tangoron-tendrombohitr’i Chittagong ary manoratra fa:
Ireo Tangoron-tendrombohitr’i Chittagong dia maitso màvana mandrakariva. Na aiza na aiza jerenao, marevaka ery ny lokony toy izay tian-dry zareo Bangladeshis entina rahateo.
Estelle Visagie koa dia tany amin’ny Havoana tao Rangamati izay nifanenany tamina vehivavy bodista telo (nonnes) ka nanomezan’izy ireo azy ny Anarana Chakma.
Sara, izay mianatra sy manao fikarohana, tohanan’ny Fulbright, dia namoaka sary maro sy ny zava-niainany tamin’ny fifangaroana tamin’ireo Bangladeshis.
Natiora any Bangladesa; Durgapur, Netrokona, avy amin’i Ariful Haque Bhuiyan (http://www.flickr.com/photos/arifbd111/3401682813/),mampiasa ny Creative Commons license
Amy Moyer izay nandositra ny fiainana feno tebitebin’ny renivohitra no manoratra:
Nofarananay tamin'ny fitsidihana tanàna iray mpanamboatra fitafiana Jamdani norariana tamin'ny tànana ny dianay. Tena manify ny Jamdani, lamba tena maivana izay fahaizana manokana mampiavaka an'i Bangladesh. Raha ny tantara momba ny akanjo Jamdani sari, izay mirefy tokony ho 13 metatra eo ho eo, dia tokony ho afaka aforitra hitovy habe amin'ny tranon’afokasoka izy. Tsara fanahy sy falifaly ery ireo mponina namela anay nandray anjara tamin’ny rary. Tena tsy azo veroka mihitsy, ary ny tsininy dia ry zareo tsy nandray karatra Visa.
Meandering Memos izay nitsidika toeram-pamokarana asa tànana iray tany Narayanganj, akaikin'i Dhaka izay ahitàna vehivavy 26000 miasa dia manoratra hoe:
Sary manaingo ny akanjo Sari – Tsy nieritreritra mihitsy aho hoe ireo haingon’akanjo rehetra ireo dia natao tànana daholo! Tena asa mila fotoana be tokoa. Ireo loko ampiasain-dry zareo dia avy amin’ny akora voajanahary avokoa.
Jacob and Sanna's blog dia midera ny ‘Bangla’, tarika Bengali mpiangaly ny gadona ankehitriny:
Hafa ity vondrona ity — hain-dry zareo tsara ery ny manome kalitao lafatra ny fanafangaroana ny gitara tandrefana & gitara beso sy ny amponga ary ireo gadona malàza, vokatry ny tany, izay laroin’ny feo mahagagan’ny mpihira fototra ao aminy, Anusheh.
Valerie ao amin’ny from Spa-Ha to Bangla dia roa volana izao no eto an-tanindrazana mba hamangy ny vadiny. Nandany andro iray manontolo mihitsy izy mba hitàna ny toeran'ny vady ao an-tokantrano any Bangladesh renivohitra Dhaka ary manamarika hoe:
Ity no iray amin'ireo andro mora indrindra hatramin’izay namoahako vola. Ny fitambaran’ny fikarakaram-bàtana tany amin’ny spa dia 600 taka, latsaky ny $10. Nomenay karama betsabetsaka ihany ny mpamily sy ny mpikarakara ny ao an-trano ary dia nolazaina fa adala mihitsy izahay tamin'izany, ary dia mahazo $4.30 sy $7 isan’andro tsirairay avy izy ireo. $1/ora no hofan'ny kianja filalaovana Tennis. Tena varo-boba raha ny vidin-tsakafo hany ka mahamenatra na dia ny hitaky famerim-bola aza.
Sonargaon, renivohitr’i Bengal taloha. Sary avy amin’ny Flickr an’i Shubho Salateen (http://www.flickr.com/photos/shubho/242268273/) ampiasana ny creative commons license
Bernie Allen ao amin’ny Life and Work in Dhaka city dia nitsidika an’i Sonargaon, iray amin’ireo renivohitra ntaolon’i Bengal. Manoratra izy:
Ny Fitehirizam-bakoka momba ny fomban-dràzana, izay isan'ny anton-diako, dia ahitàna ireo zavatra rehetra maneho ny endrika ara-kolontsain'ny firenena, ary ny zaridaina ao dia tena mahafinaritra tokoa.
Niampita ny reniranon’i Buriganga, izay mikoriana ao akaikin'i Dhaka koa izy. Mieritreritra izy fa tandindonin'ny loto io renirano io ary “tsy dia isan'andro no ahitana tsy fitohanana na fihontsonkontsonana eo, toy ireny làlana any an-tànan-dehibe ireny ihany!”
Heather ao amin’ny A Bangladesh Adventure dia namoaka sary vitsivitsy maneho ireo fiara samihafa ao an-tanànan'i Dhaka.
Ary farany nefa tsy ny kely indrindra, Caroline ao amin’ny Burkhas, Bibles and Bangladesh dia manome lisitra ahitàna ireo zavatra 20 mety ho efa fantatrao na tsia momba an’i Bangladesh.